Gini mere m ji eji GNU / Linux? | Site na Linux
Achọrọ m ịkọrọ gị site na isiokwu a ihe bụ ezigbo ihe kpatara m ji jiri ya karịa afọ 5 GNU / Linux.
M na-echeta na m na-ama-ekwu banyere ihe na m ochie blog [ebe a, ebe a, ebe a y ebe a]. N'ezie, enwere m ike ichikota ihe niile m ga-ekwu n'okpuru site n'ihota okwu nke m:
»... Iji sọftụwia efu anaghị agafe ịgbanahụ mmemme ọjọọ, nwee sistemụ ọsọ ọsọ, nchekwa, kwụsiri ike (ọbụlagodi mara mma) nke ị nwere ike ijikwa na ọchịchọ gị na ọchịchọ gị ...
Iji jiri Free Software bụ inwe mmetụta n'etiti aka gị, palpable na prediktebul, na mkpa bụ isi kpọrọ nnwere onwe nke mmadụ ọ bụla na-achọ na ọtụtụ n'ihi amaghị ihe, ma ọ bụ naanị n'ihi na ha aghọtaghị ya, enweghị ike ịnwe ...
Ọ bụ ya mere m ji eji sọftụwia efu, iji nwee nnwere onwe m, otu m chọrọ na mgbe m chọrọ… «
Ọ bụ kpomkwem La Libertad ime ihe m chọrọ site na sistemụ m, isi ihe mere m ji nwee mmasị iji GNU / Linux. Ma, ka anyị mee obere akụkọ ihe mere eme:
Afọ ole na ole gara aga, enwere m obi ụtọ na onye ọrụ Windows XP. Enwee ike ime mgbanwe na Onye ndebanye aha, na-agbanwe ụfọdụ obere ihe dị na desktọpụ na Tune UP, ma ọ bụ ịchọta mgbape ma ọ bụ nọmba serial nke ngwa m chọrọ, bụ maka m egwu ndị na-eme ka nrọ ahụ dịrị n'isi m, na m nwere ike ijikwa sistemụ arụmọrụ m.
Ọ dịrị ndụ na-echere mmelite antivirus na ọrụ, na-echere ma ọ bụrụ Ugba 32 nwere ike iwepu nje na Kaspersky mba, ma obu na ozo. Mgbe obula ohuru ohuru nke Flash Macromedia, Nrọ o ezimezi oku, M ebudatara ikpe na ndị ọzọ ga-achọ pirated Oghere Usoro ọgụgụ na net. Enweghị nkwenye, enwere m obi ụtọ, ma ọ bụ ya mere echere m.
M na-echeta mgbe mbụ version nke Firefox. A Free nchọgharị (a okwu m na-amaghị), ngwa ngwa na free. Enwere m ụjọ maka ọsọ nke ihe nchọgharị ahụ na-asọpụrụ internet Explorer, ojiji nke taabụ, ma karịsịa free, ọ bụ ihe na-amaghị na m kpuru isi m.
N'ụzọ ụfọdụ, amalitere m ịghọta na ọ bụghị ihe niile bụ n'efu bụ ihe ọjọọ. Nke nta nke nta m gbalịrị ịchọta ngwa, egwuregwu na ihe niile m nwere ike ịwụnye na enweghị ụgwọ ọ bụla na n'ụzọ dị ịtụnanya achọtara m ezigbo ngwa. Chọpụta, ọ bụ n'efu, emegheghị.
Agụ akụkọ na ntanetị, ahụrụ m saịtị nke m na-echetaghị ugbu a, ebe enwere okwu nke a Usoro njikwa (OS) nke si na CD puo, n’enweghi mkpa diski ike yana, oburu na i debanye aha n’ọrụ a na akpo Gbọ mmiri, ha zigara ya n'ụlọ gị n'efu.
Pụrụ ichetụ n’echiche m? WTF? 0_o
Ọ bụ oge mbụ m nụrụ Linux, na mgbe ndekọ ndị ahụ rutere, ọ joyụ nke ịnwale ihe ọhụrụ adabaghị n'ime m. Na Mbupu bịara discs nke Ubuntu, Edubuntu y Kubuntu na nke ahụ bụ mgbe ndị chọrọ ịmata obere ahụhụ na-amalite iri m insides. Kedu ihe dị iche n'etiti ha, gịnị kpatara sistemụ ahụ ga - eji na - enweghị mkpa diski diski?
O juru m anya na ịma mma nke KDE, ma m na-enwe mmasị na mfe nke Gnome, jọrọ njọ dị ka ọ dị. Dika amataghi ihe Linux bu, na otua ka forums na irc raara nye isi okwu a, edeputara m ndia na oge rue mgbe m banyere agha.
Oge ụfọdụ ka e mesịrị, amalitere m ịrụ ọrụ n’ebe m na-arụ ọrụ ugbu a. Na labs e nwere sọrọ buut na Debian Etch (Ule) + KDE 3.x na Windows XP. N'ebe ahu ka amalitere m itinye Microsoft na ya SO. N'ịchọsi ike ịmụ ihe, aghaghị m ịkpụzi PC enyere m ugboro 50 n'otu ọnwa. Ihe niile iji dozie ihe taa, ọ na-achị m ọchị ọchị banyere ha. Ọ bụ oge ịmara Usoro ndekọ, na ebe maka oge mbụ m mụtara na ọ dị mkpa ịgụ ozi njehie.
Debian Ọ bụ nkesa mbụ m na kemgbe ahụ, etinyewo m ya na ya. Ma ịlaghachi n'okwu a na - ahụ anya: Gịnị kpatara m ga - eji Software Nwepu?
N'ime oge amụtara m na m nwere ike ịchịkwa sistemụ arụmọrụ m. Ọ nwere ike ịmata ihe ọ na-eme, ihe na-agba ọsọ, na nke kachasị mma, ọ nwere ike ịhụ ma gbanwee akụkụ buru ibu nke ntọala nke ngwa ndị ọ jiri.
Jiri ngwa na-amasị gị, ma nwee ike gbanwee ya dịka ịchọrọ ịgbanwe ya maka mkpa gị (dika m mere Ọkpụkpụ) na-enye mmetụta na ọ bụ naanị ndị ọrụ GNU / Linux anyị maara. Ha na-ekwu na otu ọghọm Linux nwere bụ nkesa dị iche iche, na enweghị ụkpụrụ, m na-asị na nke a bụ ihe kachasị mma o nwere.
Dị ka ihe atụ, Windows Windows na-eji ihe Microsoft awade, na-enweghị ike gbanwee ihe ọ bụla, inwe imeghari ka Hardware gị SO. N'okwu m ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu, enwere m ike ịhọrọ ma gbanwee OS m maka Akụrụngwa m nwere. Echi nwere ike ịpụ Debian 7, 8 o 100, na ọ bụrụ na m chọrọ, m nwere ike ịnọgide na-eji Debian 6 ma ọ bụ ọbụna obere version.
Onye isi m ga-asị: Enwere m ike iji Windows XP rụọ ọrụ ruo mgbe m nwụrụ. Nke m na-aza mgbe niile: Na ụbọchị ị Kaspersky Gaghị emelite ya maka na ọ nweghị nkwado XP. Gịnị ka ị na-eme? Think na-eche ibi ndụ na-enweghị etinye a flash ebe nchekwa na PC na-eche na ọ bu oria? Ma ọ bụ na-enweghị eriri USB maka ụjọ na ahụhụ ga-abanye gị ebe?
E wezụga nke ahụ, ana m agwa ya, ebe a na mba anyị ọ nwere ike ọ gaghị adị, mana na ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa, ekwesịghị m ibi na ụjọ na ụjọ na ikike m na-eji na-apụnara mmadụ, ma ọ bụ na FBI nwere m backdoor SO. Agaghị m akwụ ụgwọ dị oke ọnụ iji nwee Office Suite ma ọ bụ sọftụwia ọ bụla nke na-enye m ohere ịrụ ọrụ ma bie ọrụ m. Enwere m ike ibinye onye agbata obi m ma ọ bụ nye ya onye agbata obi m, na-echeghị na enwere EULA na m na-edina.
Enwere m ike ibudata ya SO site na intaneti, tinye ya na ebe nchekwa, jiri ya, tinye ya, wepu ya. All na-enweghị mmefu ọnụ. M na-amụtakwa. M na-amụta ihe ọhụrụ mgbe niile, otu ihe si arụ ọrụ, otu esi eme nke a ma ọ bụ nke ahụ. Nke ahụ agaghị ekwu, na arụmọrụ nke PC m ka mma.
A na-akpọ ya Nnwere onwe. Ọ bụ ya mere m ji eji Software Nwepu. Ọ bụ ya mere m ji eji GNU / Linux. Ọ bụ ya mere m ga-eji dị egwu, ahụhụ, Taliban, akwụkwọ ozi zuru oke, ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Gini mere m ji eji GNU / Linux?
Anyị kwenyere n'ihe niile belụsọ ọnụ ọgụgụ nke nkesa dịnụ, anaghị m arịọ ka ọ bụrụ naanị otu (n'eziokwu anaghị m arịọ ka onye ọ bụla n'ime ha pụọ) mana ọ bụrụ na m ga-achọ ka ha sonye na ụfọdụ ọrụ, naanị nke ahụ, ọ dị mma ma ọ bụ nnukwu ọdịiche ... ma ọ bụ ọ bụ? 😛
Naanị ihe m na-arịọ gị ka ị dịrị n'otu, bụ ngwugwu usoro .. Na ọ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ iji wụnye ya na RedHat, na Debian, na na Centos.
MMM ekwetaghị m
Ebe ọ bụ na nke ahụ mere ka ọdịiche dị n’etiti otu Distro na nke ọzọ. .Eb. .RM
Dị ka m dị ka elav
Ejiri m ya na Win XP m na-ekwenye na ọ bụ chi maka nbudata antivirus na serials ya ma ọ bụ mgbawa ya ma nwee ha na FULL.
Ruo otu ụbọchị, m na-achọ Nero ma tinye ọkwa Gnu / Linux
O juru m anya.
Distro mbụ m bụ OpenSuse. Oke
Onweghị ihe ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka vidiyo, ọdịyo, wdg.
Ihe niile dị n'ọbụ aka m. Mfe, mfe ma mara mma (Lxde na Xfce)
Na ọnwa ole na ole na Gnu / Linux ọ dị m ka oge ndụ m funahụrụ keygens, mgbawa na Win
Echere m na anyị niile dị ka HAHAHAHAHAHA ahụ. Anyị chere na anyị bụ ndị gurus naanị n'ihi na anyị jisiri ike wepu ọrụ na "msconfig", ma ọ bụ dezie mpaghara na "regedit", ma nwee keygen + mgbape nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu nke ewepụtara ihe na-erughị otu izu gara aga ... anyị nọ weere ndị dike ebe a na mba m ndị anyị mere nke ahụ LOL !!!
Echetara m n'ụzọ zuru oke mgbe m hụrụ vidio nkwalite Windows Vista, ọ masịrị m na onye ọ bụla bụ nnukwu onye ofufe Microsoft na ngwaahịa ọ bụla si na ha pụta, n'ezie vidiyo nke mmetụta Vista hapụrụ m karịa ọ delightụ, ana m arụkwa ụka mgbe niile na onye nkuzi Enwere m na Windows dị mma karịa "Linux gị". Echiche m malitere ịgbanwe mgbe o gosipụtara m naanị 64MB nke onboard vidiyo ọtụtụ mmetụta karịa Vista (gụnyere asaa) nwere ma ka nwere, ebe ahụ amalitere m ịhụ Linux na anya dị iche iche.
elav nke na-agaghị ekwe omume, amaghị m ma ọ bụrụ n'ihi ego ma ọ bụ n'ihi na ha kwenyere na ha nwere Chineke na ajị agba ma ọ bụ n'ihi na ha kwenyere na ha ziri ezi, enwere ọdịiche dị n'etiti ọgba aghara ndị a ga-ahaziri, inwe ike ịmalite ya na .exe ma pa 'gnu / Linux.
Ọ bụ ezie na distros na-enye gị ọtụtụ nchịkọta ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ dị mma n'agbanyeghị na ụfọdụ na-agwụ ike, na-ewe iwe, na-agwụ ike, mana enweghị mgbagha dị irè. . / hazie, mee, wụnye.
gaa undergbè Eluigwe n'ihi na ekwenyere m na ụfọdụ ngwa kwesịrị ijikọ aka nweta ngwaahịa ka mma, mana nke ahụ dị ka ịnwa iso ndị ntị chiri rụrịta ụka.
Anaghị m ekwu na ọ dị mkpa, mana ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na distro ọ bụla nwere ike iwunye mmemme n’agbanyeghi onye ọ bụ.
Bịanụ, m ghọtara ihe ị na-ekwu, ma dị ka ezigbo troll m ga-agwa gị:
Enwere ike itinye mmemme na distro ọ bụla na:
Kpọmkwem, mana nke ahụ bụ maka mụ na gị, ọ bụghị maka papa m ma ọ bụ nne nne m 😀
Ekwenyere m na gị, n'ihi na dị ka m kwuru na ụfọdụ ọkwa ọzọ (n'ezie na elavdepeloper) maka m, ọ bụghị naanị ihe kpatara ọrụ na mkpebi m iji Linux, kamakwa ihe ndị mere na-anabata omume m na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụwa. Echeghị m na ndị ọrụ Linux niile kwesịrị inwe otu ihe ahụ, mana amaara m na ha dị m mkpa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Bravo! Braavo! plas plas xD. Ọ bụghị akpọrọ ihe. Okwu gị ziri ezi. Ọ dị njọ na m ghọtara n'oge a niile mana hey. Site na inwe ọtụtụ nkesa m na-arahụ ịnwale na ịnwale n'enweghị usoro ọ bụla na mgbe ụfọdụ n'amaghị ihe m chọrọ. Ubuntu di nma, mara nma nke uku, ihe obula emere ma rue na iru ma mana oge ufodu, achoro m ihe m ga amuta na obu ezie na enwere ubochi mgbe obi adighi m nma ma obu ndidi ka m muta ihe nke kariri m oge ufodu karie ma ka m mere onwe m, achoputara m Archbang Ọ dị mma, ọ bụghị ya bụ Archlinux, agaghị m amụta ime usoro niile site ncha, ha nyere m ụfọdụ eme mana enwere m obi anụrị. Ọ ga-abụ nkesa ikpeazụ m? Amaghị m, na ọnụego ọ na-aga echere m ya ma ọ bụ na-eche Ubuntu 12. Bravo maka Mint nke m chere bụ karịa nkesa kacha mma. Na laptọọpụ m ebe m nwetara Windows anaghịzi adị. Enwere m ikikere Windows 7 m ma ọ bụrụ. Ọ dị m ka ọnwụ Steve Jobs bụ onye yiri amamihe nye m, ọ masịrị m Macs, nhazi ha ma ha na-arụ ọrụ nke ọma, mana ịbụ Linux na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ ga - alaghachi na Mac n'agbanyeghị ọnwụnwa ịnwe laptọọpụ Mac. na m ghọtara na ngwanrọ free na ikikere ndị ọzọ na sọftụwia ndị ọzọ na-ebikọ ọnụ. M na-ewere onwe m ka onye rookie elu na ala ma ga-anọ ruo mgbe m lara ezumike nká mana achọghị m ịma.
Ekwenyere m kpamkpam ma achọpụtala m okwu gị na echiche gị. Achọrọ m ka ọtụtụ ndị dị otú ahụ hụ ya. Ana m eme ihe (ọ dị nwute otu obere oge) na ebe nlekọta a, ha gaara eme nke a dịka ha na-eme na mpaghara ụfọdụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ siri ike ịtọlite ​​nnukwu netwọkụ ahụ site na iji Linux mana ha enweela oge maka ya ma ọ bụ ma eleghị anya ọ dịghị mkpa ma ha agaghị echekwa ọtụtụ ego na ya? Ekwuru m xD.
Ọ bụ ezie na m ga-agụ EULA iji dokwuo anya otu ihe. Nghọta m bụ na mgbe ịzụrụ PC nwere Windows arụnyere, ị nweghị ike ịhazi PC ma wụnye Windows ahụ na otu ikikere. Onye ọ bụla maara ihe ọ bụla banyere nke a? Aghọtara m na EULA metụtara kwa Processor. Ya bụ, ọ bụrụ n’inwere ihe karịrị otu, ị na-emebi iwu EULA.
Magazin TuxInfo Nke 41 dị njikere maka nbudata